Warbixin weerarka Muqdisho - BBC Somali - Warar
Warbixin weerarka Muqdisho
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Abriil, 2013, 19:00 GMT 22:00 SGA
In kabadan labaatan qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo ka dhacay maxkamada gobolka Banaadir iyo jidka KM4.
Dhaawaca qaraxa maxkamada gobolka Banadir.
In kabadan labaatan qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo ka dhacay maxkamada gobolka Banaadir iyo jidka KM4. Qaraxa maxkamada ayaa dhacay kadib markii niman hubaysan ay soo weerareen.
Waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyadani maanta si weyn looga dareemay wadooyinka magaalada. Kooxo hubeysan oo ka tirsan Al shabab ayaa waxaa ay weerar iyo qaraxyaba ku qaadeen xarunta maxkmadda gobolka Banaadir oo dhimashada ugu badan ay ka dhacday.
Xaalad jahawareer leh ayaa ka jirtay maxkamadda iyo agagaarkeeda, waxaana dad badan ka baxsanayeen weerarka ay ka soo boodeen gidaarka maxkamadda halka kuwa kalana ay dhexda ka soo xirteen qolalka maxkmadda qaarkood.
wariyaha BBCda ee Muqdisho Macalimuu oo tagay goobta qaraxa hore uu ka dhacay ayaa warbixntan inooga soo diray.